बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेश प्रकरण : पीडितलाई सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ : विन्दा पाण्डे – साँचो खबर
बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेश प्रकरण : पीडितलाई सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ : विन्दा पाण्डे
८ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अपूर्ण भएको बताएकी छिन् ।निश्चित घटनामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, त्यसो गर्न नसके नपुंशक बनाउनुपर्ने र त्यो पनि नसके आजीवन कारावासको सजायँ हुनुपर्ने सांसद पाण्डेको माग छ । यो माग पूरा गर्नका लागि पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘लैंङ्गिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ महिला सांसदहरुको समूह नै बनेको छ ।
सरकारले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएकोमा पाण्डेले त्यसलाई सकारात्मक नै मानेकी छन् । तर, अध्यादेश अपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन्, ‘अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षाको जिम्मा राज्यले नदिएको भन्दै पाण्डेले आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ?’
अब यो बहस प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने अनि पीडित पक्षको कुरा सुनेर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि संसदमा थप बहस गर्ने/गराउने र अब बलात्कारीलाई नपुशंक बनाउने बहस ब्यापक हुने पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन । यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे सांसद पाण्डेको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा
हामीले बलात्कारसम्बन्धी कानुन माग गर्दा मूलतः चार/पाँचवटा कुरा उठाएका थियौं । पहिलो – पञ्चायत अन्त्य भएको ३० वर्ष भएर पनि पञ्चायती अन्त्य भएको थिएन । त्यसकारण पञ्चायती बस्नेहरुलाई जेल सजाय नै हुने गरी कानुन बन्नुपर्छ भनेका थियौं । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो अध्यादेशमा सम्बोधन भएर आएको छ ।
दोस्रो– उजुरी लिन पनि नमान्ने, जनप्रतिनिधिहरु नै जाँदा पनि कतिपय कुरा नसुन्ने भन्ने छ । पुलिस प्रशासनले नसुन्ने, निजामती प्रशासनले नसुन्ने भन्ने छ । फौजदारी अभियोगमा थाहा पाएपछि पुलिस आफैं गएर लिनुपर्ने हो । तर, उजुरी नै नलिने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरुको जुन ढङ्गको व्यवहार हुन्छ, त्योअनुसार चेतावनीदेखि निलम्वन र बर्खास्तीको तहसम्म सजाय हुनुपर्छ भनेका थियौं । जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलसम्वद्ध व्यक्ति अपराधी छ भने उनीहरुलाई आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने उठाएका छौं । अहिले आएको अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेछ भने थप ६ महिना जेल सजायँ भनिएको छ । ६ महिना भनेको त के हो र ? ६ महिना भनेको कुनै कारवाही नै होइन । यो विषयमा संसदमा बहस गर्छौं ।
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय – हामी सधैँभरि पीडकको पक्षमा मात्रै लाग्ने होइन । पीडितको बारेमा राज्यको दायित्व के हो ? अपराध पीडित संरक्षण ऐन भनेर बनाएका छौं । पीडितको हक भनेर संविधानमा लेखेका छौं । महिलाको अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने लेखेका छौं ।
अहिलेको कानूनलाई हेर्दा राज्यका लागि वर्षमा १०/१२ हजार मान्छे पीडित लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित भएर आउन सक्छन् । राज्यका लागि त्यति मान्छेलाई व्यवस्था गर्ने ठूलो कुरा हुँदै होइन । जसले आवासको सुविधा पाउनुपर्ने हो, उसले आवासको सुविधा पाउनुपर्‍यो, अध्ययन गर्ने उमेरका छन् भने शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्‍यो । उपचार गर्नुपर्ने छ भने उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्‍यो । उनीहरुलाई गरीखाने स्थितिमा पुर्‍याइसकेपछि रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्‍यो । यो कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ ।
यो किन पनि आवश्यक छ भने– धेरै हिंसा सतहमा आइसकेको छैन । ल्याएर नि के हुन्छ र भन्ने जुन छ, यसमा मेरो एकदम प्रष्ट कुरा छ – यदि हिंसापीडितको राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा लिन्छ भने साउनमा घटेको त्यो घटना आउँदैनथ्यो र सम्झना कामीले मर्नु पर्दैनथ्यो । साउनको घटना बाहिर आइसकेपछि अपराधी गिरफ्तार हुन्थ्यो नि त । अहिले पनि समुदायमा लुकेर बसेका त्यस्ता धेरै घटनाहरु छन् । यदि पीडित पक्षको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छ भने त्यो सतहमा आउँछ । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु कति भएका छन् भन्ने त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन सक्छ ।
त्यसकारण पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ । जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ? बरु कस्तोखालको घटनामा पर्ला, कतिसम्म हेर्ने भन्ने विषय हो । वालवालिकाहरुको, किशोरीहरुको एउटा होला, वयस्क महिलाहरुको अर्को होला । तर, राज्यले निश्चित पैसा दिने त्यसपछाडि अरु गर्न सकिँदैन भन्ने ? यस्ता नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन । यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ । यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न ।
राज्यले पीडकलाई लागि वार्षिक बजेट छुट्याएर खाने–बस्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितका लागि चाहिँ सकिँदैन भन्न मिल्छ ? बरु पीडकका लागि राज्य कोषबाट पैसा नछुट्याउँ, तिनीहरुका लागि श्रम शिविरमा लैजाऔं । गरीखान सक्ने उमेरका र गरीखान सक्ने स्वास्थ्य अवस्था भएकालाई श्रम शिविरमा लगेर गरीखान लगाऔं । गरीखान नसक्नेलाई राज्यको कोषबाट खुवाउनै पर्‍यो । सँगै पीडितका हकमा पनि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । पीडकको जिम्मा राज्यले लिने, पीडकले पढ्छु भने पनि पाउँछ, बिरामी भए सरकारले उपचार गर्छ । पीडकको सबै जिम्मा लिन सक्ने सरकारले पीडितको जिम्मा लिन सकिँदैन भन्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? यो कुनै हालतमा हुँदैन ।
‘नपुशंक बनाउनुपर्ने बहस संसदमा हुन्छ’
बलात्कारीको लिंग छेदन गर्ने कुरा तपाईँहरु (मिडिया)ले लेख्या हो । हामीले ‘नपुंशक (रासायनिक बन्ध्याकरण) को व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनेको हो । यो पनि सबैलाई होइन, निश्चित क्याटागोरी भन्नुस– एउटा बाबुले छोरीलाई रेप गर्छ । त्यो बाबुलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्न हुँदैन भनेर भन्ने ? एउटा वालिकामाथि रेप हुन्छ र त्यो बालिकाको पाठेघर क्षतविक्षत हुन्छ, शारीरिक हिसाबले बाहिर रिकभर भए पनि ऊसलाई जिन्दगीभर आमा बन्न नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको हुन्छ । त्यस्ता अपराधीलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्ने भन्दा त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा गर्ने ?
मान्छे मार्ने कुरामा बहस जारी छ । तर, निश्चितखाले घटनाहरुमा रासायनिक बन्ध्याकरणको कानुन बन्नुपर्छ । यो कुरालाई ‘लैंङ्गक न्यायका लागि संघीय सांसद समुह’को तर्फबाट बहसमा लैजानुपर्छ र कानुन बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । हामी स्थानीय तहसम्म बहसमा लैजान्छौं । प्रदेशका सांसदहरु र महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पनि लैजान्छौं । अब नपुशंक बनाउनुपर्ने बहस ब्यापक हुन्छ । र, संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन जहिले बस्छ, त्यतिखेर पालिका तहसम्मको र अभियन्ताहरुको समेत विचार लिएर बहस गर्छौं ।
यो बीचमा विभिन्न सेफ हाउसहरुमा बसेर, गैरसरकारी संस्थाहरुले संरक्षण दिइराख्नु परेको स्थिति छ, ती संरक्षण दिने संस्थाहरुलाई भेट्छौं । त्यहाँ बस्ने जो पीडित, जो पीडामा परेका छन्, उनीहरुको कुरा सुन्छौं । उनीहरु के चाहन्छन्, कस्तोखालको सजाय चाहन्छन्, उनीहरुलाई राज्यले अभिावकत्व दिन जरुरी छ या छैन वा कस्तोखालको अपेक्षा राख्छन् । उनीहरुको अपेक्षालाई राज्यले सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छौं ।
अर्को कुरा – १० वर्ष भन्दा मुनिको बालिका अथवा ७० वर्षभन्दा माथिको जेष्ठ नागरिकको हकमा जन्म कैद भनेर २५ वर्षको जेल सजाय भनेको छ । त्यसमा हामीले बाचुन्जेल जेल सजाय (आजीवन काराबास) हुनुपर्छ भनेका छौं । यो कुरा अध्यादेशमा सम्वोधन भएको छैन । यो कुरा सम्वोधन हुनुपर्छ ।
तथापि, अध्यादेश आउनुपर्दथ्यो, आयो । अध्यादेशअनुसार मिलापत्र गराउनेलाई त अहिलेदेखि नै कारबाही हुन्छ । नियमित अधिवेशन कुर्दा त्यतिखेरसम्म कति वटा मिलापत्र हुन सक्थे नि त्यो रोकिएला, त्यस्तोमा अहिलेदेखि कारबाही सुरु हुन्छ ।
तर, अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन । नसमेटिएका कुरालाई सदनबाट पास हुँदा समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । परिवर्तन नगर्ने हो भने फेल फेल हुन सक्छ । अध्यादेश सबै पासै हुन्छ भन्ने छैन । संसदले चाहेन भने कुनै पनि अध्यादेश फेल हुन सक्छ ।
Previous: पतिसहित भारतीलाई १३ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइयो
Next: प्रधानमन्त्री ओली लागे ताप्लेजुङ तिर !